အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing - Pain Relief Cream, Gel & Spray - အသိုင်းအဝိုင်းသတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အမျိုးအစား: အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing - Pain Relief Cream, Gel & Spray
အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing - Pain Relief Cream, Gel & Spray
သင့်ရဲ့ Tattoo ဆိုင်မှာ Numbify မပါဝင်ဘူးဆိုရင်သင်ငွေရှုံးနေတယ်။
စက်တင်ဘာလ 25, 2020 စက်တင်ဘာလ 23, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ခေတ်သစ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလောက၏အကြီးမားဆုံးအသိအမှတ်ပြုမှုတစ်ခုမှာအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည်။ မတူညီသောရွေးချယ်စရာများနှင့်အဆင့်မြှင့်ခြင်းများအမျိုးမျိုးရှိခြင်းသည်သင်၏အမြတ်အစွန်းကိုတိုးမြှင့်ရန်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီနေ့မင်းတို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့စကားပြောချင်လဲ Numbify သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ကူညီနိုင်သည် ထိုးကွင်းထိုး ၀ ယ်ယူပါ။
အထီးလိင်အင်္ဂါ desensitization များအတွက် Lidocaine Numbing
စက်တင်ဘာလ 18, 2020 စက်တင်ဘာလ 17, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ပိုမိုအငြင်းပွားဖွယ်ရာနှင့်ပျော်စရာအသုံးပြုမှုတစ်ခုဖြစ်သည် လွိုက်ကိုင်း numbing ထုတ်ကုန်သည်အိပ်ခန်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သငျသညျစောစောစီးစီးဆေးရုံကနေဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ရုံသင့်ရဲ့သိသိသာသာအခြားအနည်းငယ်ခဏတစ်ကြိမ်, တစ်နည်းနည်းပေးချင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လွိုက်ကိုင်း ရှည်လျားသောလမ်းသွားနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသား ၃ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဟာသေနတ်ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်သူတို့ခုန်နေတာဟာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက်၎င်းသည်စိတ်ပျက်စရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်ပconflictိပက္ခဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနှင့်အတူရုန်းကန်ကြသူယောက်ျားသည် အထီးလိင်အင်္ဂါ desensitization ပြissueနာ၎င်းသည်အဖြေတစ်ခုရှိကြောင်းသိရခြင်းသည်အလွန်စိတ်သက်သာစရာကောင်းပြီးအသုံးချရန်လွယ်ကူသည်။
ရိုက်ချက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောမြန်ဆန်စွာဆောင်ရွက်ပေးသော Numbing Agent - Numbify Spray
စက်တင်ဘာလ 13, 2020 စက်တင်ဘာလ 12, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Numbify အစွမ်းထက်အဖြစ်တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့လူသိများသည် လိမ်းမေ့ဆေး။ ၎င်းကိုတက်တူးထိုးနာကျင်မှုမှအစသွေးလွန်တုပ်ကွေးခြင်းမှအနာသက်သာစေရန် bug bites အထိအသုံးဝင်သည်။ သို့သော်သင်က Numbify ကို pre-shot numbing agent အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာသင်သိပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံး numbing ထုတ်ကုန်များကိုစတင်အသုံးပြုသည်။Numbify အထူးသဖြင့်ယင်း၏လျင်မြန်သောသရုပ်ဆောင်မှုနှင့်အထူးသဖြင့်ထိရောက်သောပုံသေနည်းအတွက်ရိုက်ချက်အတွက်ဖြစ်သည် နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေးတစ်နိုင်ငံလုံးမှအပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားခဲ့ရသည်။ Numbify နာကျင်မှုနှင့်ယားယံမှုကိုသက်သာစေရန်မည်မျှကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်ကိုအကြိမ်ကြိမ်အကြိမ်ကြိမ်ချီးမွမ်းခဲ့သည်။
များစွာသောအသုံးပြုမှုများအတွက် Numbify Numbing
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 7, 2020 စက်တင်ဘာလ 6, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Numbify အမျိုးမျိုးသောနံပါတ်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထွေထွေလိမ်းဆေးမေ့ဆေးအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းတွင်လည်းပါရှိသည် 5% Lidocaine Anorectal Hemorrhoids အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့်ဗားရှင်း။
သာမန်အားဖြင့်ထုံဆေးကိုယေဘူယျအားဖြင့်အခြေအနေများတွင်အသုံးပြုသည် နာကျင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ယားယံသက်သာခြင်း ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ခြစ်ခြင်း၊ အသေးစားလောင်ကျွမ်းခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးကိုက်ခြင်းနှင့်တက်တူးများကဲ့သို့သောဆန္ဒရှိသည်။ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူအများအသုံးပြုရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည် Lidocaine ထုတ်ကုန်များတံဆိပ်ကပ်ခြင်းမဟုတ်သောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တော်တော်များများထင်သည်ဟုအချို့သောသူများအကြောင်းကိုယနေ့အချိန်အနည်းငယ်မျှပြောချင်ခဲ့သည်။
ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်ပြင်းထန်သောသံစဉ်များ - အများဆုံးနာကျင်စေသည့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပင်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း
သြဂုတ်လ 29, 2020 သြဂုတ်လ 28, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးရှိအလှပြင်ဆိုင်များ၊ လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားရေးဆေးခန်းများနှင့်နေ့ရောညပါကူးပြောင်းခြင်းများပြုလုပ်ကြသည် Numbify သူတို့ရဲ့ဆံပင်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ Numbify ၏အပြင်းထန်ဆုံး Numbing စိန်ခေါ်မှု !!!
သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, Numbify တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လူသိများသောစီးပွားရေးဆိုင်ရာသမာဓိရှိမှုသုံးခု။ သမာဓိစောင့်သိရန်ကတိသစ္စာအမြင့်မားဆုံးသောဆေးဝါးကုမ္ပဏီဖြစ်ခြင်း၊ Numbify ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းကဤမူသုံးရပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်မှာသူတို့၏တာ ၀ န်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
Pots ထဲကနာကျင်မှုကိုဖယ်ထုတ်ခြင်း - Lidocaine ဖြင့် Numbify
သြဂုတ်လ 24, 2020 သြဂုတ်လ 23, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့သုံးပြီးအကြောင်းကိုပြောပြီးကတည်းကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဖြစ်ခဲ့သည် ဆေးထိုးဘို့ထုံနှင့်ငါတို့ရရှိသောတုံ့ပြန်မှုမော်ကွန်းပဲ! ထွက်လာသည်ကလူများထင်သည်ထက်ပင်အပ်နာကျင်မှုကိုကြောက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်များသည်သူတို့ကိုယူနေကြသည် Numbify သူတို့နှင့်အတူယခုသူတို့ဆရာဝန်ထံသူတို့နာကျင်မှုလျှော့ချရန်နည်းလမ်းတစ်ခုနှင့်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကကမှ ဦး ဆောင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပါပြီ။
Numbify တန်ဖိုးနည်းစျေးနှုန်း - ပင် Pandemic ၌တည်၏
သြဂုတ်လ 17, 2020 သြဂုတ်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
စက်ရုံတိုင်းလိုလိုတွင်ဓာတ်ငွေ့ပြတ်လပ်မှုနှင့်အတူအရာအားလုံးနီးပါး (ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်နိုင်သည် မှလွဲ၍) သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ဆက်လက်မြင့်တက်နေသည်။ များပြားလှပြီးရှာဖွေရလွယ်ကူသောပစ္စည်းများသည်ဤကပ်ရောဂါတစ်ဝိုက်တွင်ဗဟိုပြုစွန့်စားရမှုများကြောင့်မရရှိနိုင်ပါ။
ရိုက်ချက်များအတွက် Numbify Numbing Spray? အပ်နာကျင်မှုကိုသတ်ရန်ရိုးရှင်းသည့်နည်းလမ်းတစ်ခု
သြဂုတ်လ 9, 2020 သြဂုတ်လ 8, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဘ ၀ ၌ကြီးမားသောပျော်ရွှင်မှုများအနက်တစ်ခုမှာသင်မဖြစ်နိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းများအတွက်အသုံးပြုမှုအသစ်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ သံမဏိသို့မဟုတ်ကြွေမျက်နှာပြင်များကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် Coca-Cola ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအသက်အန္တရာယ်ရှိသည့်အခြားဟက်ကာများကဲ့သို့သောအရာများ။ ယခုအပတ်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးထုတ်ကုန်များထဲမှလူကြိုက်များမှုတိုးပွားလာသောအသုံးပြုမှုအသစ်အကြောင်းလေ့လာခဲ့သည်။ Numbify!
Epilators နှင့် Laser Hair Removal များအတွက် Numbing Creams - Numbify သည်ဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း
ဇူလိုင်လ 22, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ထိုအရာကိုရင်ဆိုင်ကြပါစို့။ ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းသည်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုကြီးမားသောနာကျင်မှုဖြစ်သည်။ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ခြင်းနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါသည်များစွာထိခိုက်စေပြီး၊ ဆံပင်မပေါက်စေရန်လေဆာဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်း၊ ဆံပင်နှင့် follicles ကိုပကတိလောင်ကျွမ်းခြင်းစသည့်အချက်များကြောင့်ပင်ငါ့ကိုမစတင်ပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဆံပင်ဖယ်ရှားရေးအမျိုးအစားနှစ်မျိုးနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်သောအရာတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်ချင်သည် ထုံနေ ကျွန်ုပ်တို့သည် epilator ကိုအသုံးပြုသောအခါသို့မဟုတ်လေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အထူးထိရောက်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည့်ထုတ်ကုန် (များစွာသောအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်) ထုံနေ ရည်ရွယ်ချက်များ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီအထူးသဖြင့်ဤနှစ်ခုအကြောင်းကိုမေးမြန်းတဲ့ပါပြီ။ )
Numbify - သဘာဝအားဖြင့်သင်၏ Numbing Profits များကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း
ဇူလိုင်လ 18, 2020 ဇူလိုင်လ 18, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သတင်းများအားလုံးကြားသိရပြီးအင်တာနက် - အော်ဂဲနစ်နှင့်သဘာ ၀ ထုတ်ကုန်များသည်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းကောင်းများဖြစ်သည်။ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှုမြင်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ပါကသဘာဝနှင့်အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များသည်အမှန်တကယ်ပိုကောင်းပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်အရေးအကြီးဆုံးမေးခွန်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ သဘာဝနဲ့အော်ဂဲနစ်လယ်ကွင်းမှာ ၀ င်ငွေရဖို့ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
Numbify - ပိုမိုကောင်းမွန်သော Tattoo အတွေ့အကြုံအတွက်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ
ဇူလိုင်လ 10, 2020 ဇူလိုင်လ 26, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
တက်တူးအရောင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်များနှင့်တစ်နိုင်ငံလုံးမှအနုပညာရှင်များမှကျွန်ုပ်တို့ကြားသိခဲ့ရသောအကြီးမားဆုံးတိုင်ကြားချက်များထဲမှတစ်ခုမှာနံပါတ်များသောထုတ်ကုန်များသည်အရေပြား၏အရောင်နှင့် elasticity ကိုပြောင်းလဲစေပြီးတက်တူးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပြlaterနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယုတ်ညံ့တက်တူးထိုး။
အမေဇုံမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းသလဲ။ သူတို့မလုပ်တော့ပါ - ယခုသူတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပေးချေမှုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုထုတ်ဝေတော့မည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 9, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Amazon၊ Walmart နှင့် eBay တို့ကဲ့သို့သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်တတိယပါတီရောင်းသူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကျင့်ဝတ်နှင့်မညီသောအပြုအမူများကိုသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (နှင့်တုန့်ပြန်မှုအတု ၁- စသည်) ကိုဆွေးနွေးနေကြသည်။ ၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်ထုတ်ကုန်များအပေါ်ကြယ်ပွင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သာမာန်အားဖြင့်လူတစ် ဦး အားသူတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုအမှန်တကယ်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်မြင်စေရန်သူတို့၏အခွင့်အလမ်းများကိုတိုးတက်စေရန်။
အဘယ်ကြောင့်သဘာဝ Numbing ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ? အဖြေ - Numbify
ဇြန္လ 29, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သဘာဝနှင့်အော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များသည်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင်အစဉ်အဆက်တိုးပွားလာနေပုံရသော်လည်းသိပ္ပံပညာတွင်အမြစ်တွယ်နေသောဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်စျေးနှုန်းချိုသာသောဒြပ်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်သဘာဝအခြားနည်းလမ်းများကိုပင်အဘယ်ကြောင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်ကိုစဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ဤမေးခွန်းသည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာလိုသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှအနှစ်သက်ဆုံး Numbing ထုတ်ကုန်များအဘယ်ကြောင့်သဘာဝသို့သွားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ပိုကောင်းသော Numbing ပါဝင်ပစ္စည်းများသဘာဝကျကျ Superior Numb များအတွက်ပါစေ
ဇြန္လ 26, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
At Numbifyသူတို့သည်အလွန်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသောနာကျင်မှုပုံသေနည်းနှင့်ဖြန့်ဝေသည့်စနစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးရေကျခြင်းအတွေ့အကြုံကိုရရှိရန်အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့သူတို့ကသင်ဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို ၀ ယ်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့သူတို့တွေဟာသာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဂဏန်းအတွေ့အကြုံကိုပေးရခြင်းဟာဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တာ ၀ န်ပဲလို့သူတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
အမေဇုံချက်ချင်း FDA (Food & Drug) ထုတ်ကုန်များအပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကိုချက်ချင်းရပ်ပစ်ရမည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 22, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	1 မှတ်ချက်
Numbify အဲဒါကိုမေးနေတယ် အမေဇုံ, ကို eBay နှင့် Walmart အထူးသဖြင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကိုရပ်ပြီးဖယ်ရှားပါ FDA သည်ဖြေရှင်းချက်များကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ "စားသုံးသူတွေကသဘောတူရုံတင်မကဘဲပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုကိုဘယ်တော့မှမဝယ်နဲ့စားသုံးသူကို ဦး စားပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဆီက FDA ထုတ်ကုန်တွေကိုသာဝယ်ယူဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်" ဟုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့သည်။
အင်အားအကောင်းဆုံး / အကောင်းဆုံး Tattoo Numbing Creams - အရည်ဂျယ်လ်ဂျယ်လ်နှင့်မှုန်ရေမွှား
ဇြန္လ 19, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
At Numbifyကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နည်းပါးသောနာကျင်မှုဖော်မြူလာနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းစနစ်များကိုအဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်အကောင်းဆုံးဆေးမင်ကြောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပေးရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ ဤသည်အားထုတ်မှုကသင်ဝယ်လိုသောအလွန်လိုချင်သောတက်တူးထိုးပစ္စည်းကိုပြုလုပ်ရန်ကူညီပေးသည်။
ထုံနေသောတက်တူးများဖြင့်ထူးခြားသည့်အချိန်နှစ်ခုရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည် Numbify ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်း၊ အရေပြားတွင်လိမ်းသင့်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ခေါ်ဆိုသည့်အတိုင်းတက်တူးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်တက်တူးထိုးခြင်းများမပြုလုပ်မီ။ ဤသည်မှာ numbing ဖြေရှင်းမှုအမျိုးအစားသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဤအချိန်ကာလသည်သင့်အား Creams, Gels, Liquid Gels နှင့် Spray အပါအ ၀ င်အမျိုးမျိုးသောအေးဂျင့်များနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ Numbify သူတို့ကိုအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
အပြင်းထန်ဆုံး Numbing ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူပင်၎င်းသည်အောင်မြင်မှုအတွက်ခက်ခဲသောလမ်းကြောင်းဖြစ်သည့် Numbify Story
ဇြန္လ 14, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်မှရောက်ရှိလာသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သဘာဝနှင့်အော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည်သင်၏ဘ ၀ ကိုဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကြီးပြင်းလာပြီးအခိုင်အမာယုံကြည်သည်။ ဒါကြောင့်မလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ Numbify Lidocaine Numbing နယ်ပယ်တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ နာကျင်မှုနှင့်ပြင်းထန်စွာယားခြင်းဒဏ်ကိုခံရသည့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပုံသေနည်းသည်မတူနိုင်ပါ။ သင်သတိမပြုမိသောအချက်မှာသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သမာဓိရှိခြင်းနှင့်ရိုးသားသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်သူတို့၏ကတိက ၀ တ်ပြုမှုဖြစ်သည်။ Numbify မည်သည့်တိရစ္ဆာန်စမ်းသပ်မှုကိုမျှပြုလုပ်မည်မဟုတ်ပါ၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂေဟစနစ်ကိုတိုးတက်စေရန်အမြဲကြိုးစားနေသည်။
Numbify ရိုးရှင်းသောသုံးသပ်ချက်များကိုသာပံ့ပိုးရန် Numbing စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်စားသုံးသူများကိုဖိတ်ကြားခြင်း!
ဇြန္လ 7, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောခေတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရာများအနက်မှတစ်ခုမှာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုစာရင်းပြုစုရန်အတွက်အွန်လိုင်းအရောင်းအ ၀ ယ်နေရာများစွာရှိသည်။ သင်၏လက်ချောင်းထိပ်များ၌သန်းချီသော ၀ ယ်ယူမှုရွေးချယ်စရာများရှိပြီးသင်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသင်စီစစ်နိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြန်နှုန်း၊ ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၊ စျေးနှုန်းချိုသာသောဈေးနှုန်းသို့အပြန်အလှန်အားဖြင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတုများကိုရပ်တန့်ရန် Numbify သည် Numbing ကုမ္ပဏီများအားလုံးကိုတောင်းဆိုသည် -“ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသည်အမှန်တရားကိုသိရန်ထိုက်သည်”
မေလ 31, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့တယ် Numbify - အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေသောထုံနေသောထုတ်ကုန်လိုင်း၊ Oregon Salem မှအခြေခံသည်။ သို့သော်ယခုအပတ်တွင်သူတို့ဖောက်သည်များအကြောင်းပြောစရာများစွာရှိသည်။ ပိုင်ရှင် Randy Durig နှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်အခြေအနေအပေါ်မည်သို့သဘောထားကြောင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဖော်ပြသည်။ Randy ပြောနေ:
ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆေးဝါးဈေးကွက်သို့ ဦး ဆောင်နေသည့် Numbify
မေလ 28, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်နေထိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးစွာသောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ခံစားခွင့်အလွန်လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီများစွာသည်ထိုကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များရှိလယ်ယာမြေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်လူများအားသူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာများကိုပြောရန်ငှားရမ်းခြင်းဖြင့်ထိုအခွင့်အရေးကိုအလွဲသုံးစားပြုနိုင်သည် အမေဇုံ, eBay နှင့် Walmart, ထိုညာဘက်ရှိခြင်းသည်အခြားကုမ္ပဏီများနှင့်လူတို့အား၎င်းအလေ့အကျင့်သည်မည်မျှမှားကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။
Numbify - အားကောင်းသော Numbing? ဟုတ်သည် - သင့်အဘိုး၏အသံအတိုးအကျယ် Cream? မဟုတ်ဘူး
မေလ 27, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
2020။ ရာစု၏ငါးပုံတစ်ပုံရောက်လာပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများကိုပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်မျှဝေးကွာစွာရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့အသက်ရှင်ဖို့အံ့သြစရာကောင်းသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းတွေများပြားလာတယ်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုးတက်လာတယ်၊ ကမ္ဘာကြီးဟာအရင်တုန်းကမတွေ့ဖူးတဲ့နည်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါကူးစက်မှုကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နေတယ်။
Numbify - ခြွင်းချက်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံအတွက်ရိုးရိုးသားသားသုံးသပ်ချက်များ
မေလ 12, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဒါဟာမလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဖွင့် Numbify Lidocaine Numbing နယ်ပယ်တွင်အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့၏စီးပွားဖြစ်ဖော်မြူလာ (နာကျင်မှုဒဏ်နှင့်ပြင်းထန်စွာယားခြင်း!) မတူနိုင်ပါ။ သင်သတိမပြုမိနိုင်သည့်အချက်မှာသူတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သမာဓိရှိရန်သူတို့၏ကတိက ၀ တ်ပြုမှုနှင့်ရိုးသားသောပြန်လည်သုံးသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်သူတို့၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။
သင်၏ Day Spa ကိုပြန်လည်ဖွင့်ရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီလား။ Numbify တွင်သိုလှောင်ရန်သေချာစေပါ။
မေလ 5, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသည် ၁၉၂၀ ခုနှစ်စပိန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားချိန် မှစ၍ အဆိုးရွားဆုံးသောကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်းကိုသတ္တိရှိရှိရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ခေတ်သစ်ကာလသည်ခဲယဉ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတံခါးများပိတ်ခြင်း၊ အရိုးစုအဖွဲ့များသို့လျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ် ၀ န်ထမ်းများ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဖောက်သည်တစ် ဦး trickle ဖို့နှေးကွေး။ ပြည်နယ်အတော်များများသည်နောက်ဆုံးတွင်ပြန်လည်ဖွင့်ရန်နှင့်ပိတ်ဆို့မှုအမိန့်များကိုပယ်ဖျက်ရန်အစီအစဉ်များစတင်နေကြသည်။
Numbify - ရိုးသားပြီးအစွမ်းထက်သော Numbing အတွေ့အကြုံအတွက်သင်၏လက်လီမိတ်ဖက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဧပြီလ 21, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားမှဖြစ်သည် အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်များမှတက်တူးထိုးစျေးဆိုင်, နေ့က spas ကနေဖယောင်းအလှပြင်ဆိုင်သည်အထိ, Numbify ပို။ ပို။ နေရာများတွင်နှင့်သင်၏စိတ်ကိုမှုတ်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများတွင်တွေ့ရှိရသည်။
Numbify သည်ထိရောက်မှုရှိသည့်နေရာ၏ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိနေခြင်းကြောင့်လူသိများသည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တိုးတက်မှုအပေါ်ကတိကဝတ်များနှင့်ထိရောက်စွာနှင့်ပစ်မှတ်ထားဖြန့်ဝေရန်အမှန်တကယ်အာရုံစိုက်မှုကြောင့်၊ Numbify သည်ရေနံစိမ်းစွမ်းအားကြီးမားသောနဂါးတစ်ကောင်ကိုဖန်တီးလိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အရမ်းစမတ်ကျတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုလောက်သာမက၊ ထောင်ပေါင်းများစွာယူ
သင် Numbify သို့ပြောင်းသည့်အချိန်ကာလသည်မဟုတ်လော
ဧပြီလ 15, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဟေ့၊ ငါတို့ရပြီ၊ မင်းကဒီကျောင်းဟောင်း numbing ထုတ်ကုန်ဟောင်းကိုသင့်ရဲ့တက်တူးထိုးဆိုင်၊ နေ့ကစတာ၊ ဆေးဆိုင်ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာသယ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လူအချို့ကိုကူညီသည်။ ၎င်းသည်၎င်းအတွက်အလုပ်မလုပ်သော်လည်းများစွာသောသူတို့ကိုပြောင်းလဲရန်ခက်ခဲသည်။ ရွေးချယ်မှုများစွာနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအွန်လိုင်းတုန့်ပြန်မှုအတုများကဲ့သို့သောဆိုဒ်များနှင့်အတူ အမေဇုံ နှင့် Walmart စက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုဖျက်ဆီး, သင်သည်အဘယ်မှာပင်စတင်သလဲ? ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစတင်အကြံပြုပါသည် Numbify!
Numbify - ဒါကရည်းစားဟောင်းများအတွက်မဟုတ်ပါ
ဧပြီလ 4, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Numbify တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်လူသိများသောအားကောင်းသောအစွမ်းထက်သောအရောင်တောက်တောက်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပြိုင်ဘက်များကိုထုတ်ကုန်တစ်ခုအနေနှင့်သာမကကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းစနစ်တကျအရှက်တကွဲဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၎င်း၏အလွန်ထိရောက်သောပုံသေနည်းကြောင့်, Numbify လျင်မြန်စွာတစ်ဖြစ်လာသည် လိပ်ခေါင်းရောဂါကုသမှုအတွက်အကြိုက်ဆုံး။ တကယ်တော့အပိုခွန်အား Numbify အထူးခိုင်မာသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းသည်မကြာခဏအလွန်အမင်းပြင်းထန်သော anorrctal hemorrhoids နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်။
မတ်လ 28, 2020 ဇူလိုင်လ 13, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတို့သည် coronavirus မှပိတ်ထားချိန်တွင်အချိန်ကာလမှန်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အရာအားလုံးလိုအပ်နေသောဖောက်သည်များ၏ပုံမှန်စီးဆင်းမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုစမ်းသပ်ရန်စီးပွားရေးတွင်စိတ်မချရသောအခွင့်အလမ်းကိုအသုံးချခြင်းသည်သင်၏ဆိုင်အတွက်အလွန်အကျိုးအမြတ်များသောအခွင့်အလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်စီးပွားရေးနှေးကွေးသောကြောင့်နမူနာဝယ်ယူခြင်းများကိုလှည့်ပတ်သွားရန်ငွေအမြောက်အများရှိကောင်းရှိမည်။
Coronavirus ၏ Chaos များကြားတွင် Numbify သည်ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးနေသည်
မတ်လ 22, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
CoViD-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေစဉ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှကုမ္ပဏီများသည်ကုန်ပစ္စည်းများပြတ်လပ်နေသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများမှာ Numbify ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင်ခြင်းနှင့်အများဆုံးစောစောစီးစီးအများဆုံးထက်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်။ ဤသည်ကသူတို့ကိုပတ်ပတ်လည်သွားကုန်ပစ္စည်းများများများရှိရှိ၏ရှုပ်ထွေးသောအနေအထား၌သူတို့ကိုထားခဲ့တယ်။ သင်ဝယ်ဖို့ပိုနှစ်သက်လား အမေဇုံ, Walmart, ကို eBayသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်တိုင်မှတိုက်ရိုက် Numbify.com, သင်သည်အမိန့်ကိုလက်ရှိသူတို့ရဲ့ပုံမှန်အချိန်ဇယားမှာတင်ပို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်, သူတို့အဘယ်သူအားမျှနောက်ကွယ်မှ။
ဆေးဆိုင်များအတွက် Numbify လက်ကား Lidocaine Hemorrhoid Numbing
မတ်လ 12, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဒါကိုရင်ဆိုင်ကြရအောင်။ ဒီဟာသကဘယ်လောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာမဆက်ခင်မှာဘယ်လိုနည်းနဲ့စကားပြောကြရအောင် Numbify သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်တွင်အရောင်းမြှင့်တင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
Drugs.com အရ - လိပ်ခေါင်းဟုလည်းခေါ်သည့်သွေးလွန်တုပ်ကွေးသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိလူ ၂၀ တွင် ၁ ဦး ခန့်တွင်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းရသည်။ အသက် ၅၀ ကျော်လူများ၏ ၅၀% ခန့်သည်အသည်းရောင်ရောဂါရှိသည်။ အူသိမ်အူမလှုပ်ရှားမှုအတွင်းပုံမှန်အားဖြင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်းကြောင့်သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကြောင့်သွေးပြန်ကြောများသောရောဂါလက္ခဏာများမှာအများအားဖြင့်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ”
Numbify - ဝင်ငွေခွန်တွင်သင်၏မိတ်ဆွေ Lidocaine Numbing မှတဆင့်မြှင့်တင်ရန်
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 27, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များ၏လူမှုရေးဆိုင်ရာအပြုအမူများအပေါ်သဘာဝအလျောက်စိတ်ထားနှင့်ပတ်သက်သောအလွန်ကောင်းသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံမှစကားပြောသောသင်၏မိတ်ဆွေတစ် ဦး ကသင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိသည်နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုမှာစက်ပြင်တဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခြင်းပါပဲ။ သူ / သူမသည်သင်အသုံးပြုထားသောကားတစ်စီးကိုရွေးချယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်အတွက်ပင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်သူတို့၏အခွန်များနှင့်အတူကူညီနိုင်သည်သို့မဟုတ်သူတို့၏အိမ်နောက်ဖေးတွင်ထင်းသိုလှောင်ရန်တဲတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ သူငယ်ချင်းများအကြား ၀ န်ဆောင်မှုကုန်သွယ်ရေး၏အယူအဆသည်နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ။ နှစ်ပေါင်းရာချီသောကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များကိုအကျိုးပြုခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏မျိုးစိတ်များကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ခံစားနေရသောကြီးမားသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အောင်မြင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 15, 2020 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဤခွေးသည်ခွေးကမ္ဘာတွင်စားသည်။ မြင်းပြိုင်ပွဲတွင်သာနေရန်အတွက်ကုမ္ပဏီမည်မျှလှည့်စား, ကောက်ကောက်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်တရားမဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလှည့်သည်ကိုတွေ့မြင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ၎င်းအလေ့အကျင့်များကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်လုံလောက်စွာနှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမလုံလောက်ခြင်းကြောင့်ပြisနာများ၏ကြီးမားမှုကြောင့်အမှားများဖြစ်နေသည်။
Kava နှင့်အတူလက်ကားစျေးနှုန်း Numbify Lidocaine
ဇန်နဝါရီလ 29, 2020 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
တက်တူးအရောင်းဆိုင်များ၊ ဖယောင်းအလှပြင်ဆိုင်များနှင့်ဆေးဆိုင်များမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်များပိုင်ရှင်များသည်ထုံဆေးဖြင့်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောထုတ်ကုန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများကိုလိုချင်ကြသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ Numbify အတိအကျပေးပို့ပါ။ Numbify စျေးကွက်ထဲတွင်အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးဒုတိယနေရာတွင်ရပ်တည်နေသည်။ အကောင်းဆုံးအပိုင်းမှာသင်၏မယုံနိုင်လောက်သောထုတ်ကုန်ကိုသင်၏တည်နေရာတွင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်သင်၏ ၀ ယ်ယူသူများကရလဒ်များကိုသဘောကျမည်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရလာဒ်များသည်အရေးကြီးသည်၊ သင်၏ဖောက်သည်များအားထပ်ခါတလဲလဲပြန်လာစေမည့်အရာလည်းဖြစ်သည်။
Hemorrhoids အတွက်အကောင်းဆုံးအမြှုပ်ထွက်ပစ္စည်းများ - ယနေ့သင်၏ Online ဆေးဆိုင်တွင်စတင်သယ်ဆောင်လာသည်
ဇန်နဝါရီလ 8, 2020 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ကျနော်တို့အကြောင်းအများကြီးပြောခဲ့တယ် Numbify နှင့်၏လယ်ပြင်၌၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ တက်တူးထိုးခြင်း၊ ထိုးဖောက်ခြင်း၊ ဖယောင်းနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ, ဒါပေမယ့်ငါတို့အပိုအင်အားအပေါ်အခြေခံလုံလောက်စွာထိမိကြပြီမဟုတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သည် Numbify ထုတ်ကုန်များနှင့်သူတို့၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ - Hemorrhoids ။
သူတို့၏ခန္ဓာဗေဒတည်နေရာကြောင့်လိပ်ခေါင်းသည်မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်သည် (အမှန်တကယ်ရှိခြင်းကဲ့သို့မသက်မသာဖြစ်သော်လည်း) ဒါဟာစအိုတွင်း၏ဆွေးနွေးမှုသူတို့ရဲ့ထိုင်ခုံများတွင်အများဆုံး disreputable scoundrel squirm စေနိုင်သည်ကိုလုံးဝနားလည်နိုင်သည်, သို့သော်သင့်လျော်သောဆေးဝါးကုသစောင့်ရှောက်မှုအရှက်ရရိုးရှင်းစွာရှောင်ရှားသောအခါပြwhenနာဖြစ်လာသည်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိစျေးဆိုင်များ၊ အလှပြင်ဆိုင်များ၊ Spas နှင့်ဆေးဆိုင်များအတွက်အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing ရေမှုန်ရေမွှားဂျယ်လ်နှင့်ခရင်မ် !!
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
စီးပွားရေးလောကရှိကောင်းမွန်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာသင်၌ကုန်ပစ္စည်းကြီးတစ်ခုရှိသည်နှင့်၎င်းသည်မိမိကိုယ်ကိုရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကနှင့်အတူထက်ပိုစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ဘယ်တော့မှမ Numbify, ထုတ်ကုန်လိုင်း Lidocaine အခြေခံနာကျင်မှုနှင့်ယားယံသက်သာခြင်းအတွက်အထူးပြုသည်အလွန် တစ်နိုင်ငံလုံးနှင့်လက်ကားအဆင့်မှာခိုင်မာတဲ့လက်ခံမှု။ တစ် ဦး ချင်း၊ တစ် ဦး၊ နှစ် ဦး၊ တက်တူးထိုးသည့်ဆိုင်များ၊ ဆေးဆိုင်များ၊ အလှပြင်ဆိုင်များ၊ နေ့တစ်ရက်အပန်းဖြေစခန်းများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများဆိုင်များ (shhh!) ပင် Numbify စိန်ခေါ်မှု၏အားသာချက်ကိုယူပြီး Numbify သည်မည်မျှပိုကောင်းသည်ကိုဘေးချင်းယှဉ်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေသည်။ နာကျင်မှုသက်သာစေရန်
တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့အပြားတွင်လက်လီ Lodocaine Numbing Packages များရနိုင်သည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ယနေ့ခေတ်တွင်လူတိုင်းပြောနေပုံရသည် Numbify! မှ Youtube မှမစ္စတာအန်တိုနီယို ထိပ်တန်းဆယ်ခုတွန့်နေတဲ့မုန့်တီထွင်မှုဆိုဒ်များသို့၊ Numbify အားလုံးဒေါသထွက်နေတယ် ဘေးချင်းယှဉ်ယှဉ်ယှဉ်ပြိုင်မှုများတွင်ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုဖြိုခွဲခဲ့သည်။ နှင့် ခွင့်ပြုခဲ့ lidocaine ၏တရားဝင်အများဆုံးပေါင်းစပ် ကောင်တာကျော်နှင့်တစ် ဦး ကျန်းမာသန်စွမ်းအားလုံးသည်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများအလေးအနက်ပြုတ်ရည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိဖို့လွယ်ကူတယ် Numbify အများပြည်သူမျက်စိသို့၎င်း၏လမ်းရှာတွေ့သည်။
Lidocaine Numbing - အရည်အသွေးပြည့်ဝသောသဘာဝသဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ
နိုဝင်ဘာလ 30, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေသောနာကျင်မှုသက်သာစေသောထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာမီကသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည် Numbify။ ၎င်းကိုပိုမိုအားကောင်း၊ ပိုမိုထိရောက်သော၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများအကြောင်းအနည်းငယ်ပြောလိုကြသည် Numbifyနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့အားပါဝင်ပစ္စည်းများတကယ်တွန်းအားပေး Numbify သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင်လာမယ့်အဆင့်အထိ။
လက်လီ Lidocaine Creams, Gels နှင့် Spray Numbify - ယခုတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ပို့ဆောင်ခြင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick နိုဝင်ဘာလ 23, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်ပိုင်ဆိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ တက်တူးထိုးဆိုင်ကိုစီမံခန့်ခွဲ, နေ့ spa, အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်, သို့မဟုတ်လေဆာအရေပြားကုသမှုစင်တာ, ထိပ်တန်းအရည်အသွေးလိမ်း lidocaine ထုတ်ကုန်ရှိခြင်းမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။ လူနာများ / ဖောက်သည်များသည်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြုလုပ်ရန်စက်ရုံကိုရွေးချယ်သောအခါနှစ်သိမ့်မှုအဆင့်သည်ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ ခေတ်သစ်ဆေးပညာ၏အံ့ of ဖွယ်ရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံကြောများမှနာကျင်စေသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတုံ့ပြန်ပုံကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ပြီးထိုနာကျင်မှုကိုသိသိသာသာလျှော့ချပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်များအတွက်အားကောင်းသော၊ ထိရောက်သော၊ ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောခရင်မ်အတွက်ယခုလက်လီစျေးနှုန်းများရနိုင်သည်
နိုဝင်ဘာလ 15, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်၏အွန်လိုင်းဆေးဆိုင်တွင်မည်သည့်ထုတ်ကုန်များသယ်ဆောင်ရန်သင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲ။ အွန်လိုင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ထောင်ခြင်း (တစ်နိုင်ငံလုံးအုတ်နှင့်မော်တာနေရာများရာနှင့်ချီ။ ရှိမည့်အစား) ထောင်နှင့်ချီသောအထူးပစ္စည်းများကိုသိုလှောင်နိုင်သောကြီးမားသည့်သိုလှောင်ရုံအနည်းငယ်ရှိခြင်းစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း / ဆေးဝါးလိုအပ်လျှင် (မရှိသလောက်ပင်) သင်၌၎င်းကိုသိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးပိုများသောပမာဏဖြင့် ၀ ယ်ယူရန်သိုလှောင်ထားနိုင်ပြီးငွေစုဆောင်းနိုင်သည်။ အဓိကသော့ချက်ကတော့ဒီအထူးပစ္စည်းများကိုသာမကဘဲကျန်ဂိုဒေါင်ကိုပညာရှိစွာအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကိုရောင်းချသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသယ်ဆောင်ခြင်းသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သောကြောင့်လူနာ / ဖောက်သည်ကိုအများဆုံးကူညီသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Tattoo Removal Facilities အတွက် Lidocaine Pain Relief လက်ကားရောင်းချမှု
နိုဝင်ဘာလ 8, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
လေဆာစွမ်းအင် အသုံးပြု၍ ရသောအမှားဖယ်ရှားရေးအားလုံးအတွက်သင့်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်အမြတ်အစွန်းများကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိသည်။ သင့်မှာလေဆာရောင်ခြည်ဖယ်ရှားတဲ့နေရာကိုတက်တူးထိုးထားတဲ့လူနာတွေရှိတယ်။ သူတို့ကသူတို့နောင်တရနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခုသူတို့ရှိနေတဲ့ပုံဒါမှမဟုတ်လူနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့လေဆာတက်တူးထိုးတာကိုဖယ်ရှားတာဟာအဲနာမည်ရဲ့စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လည်ပင်းမှာမလိုချင်တဲ့မီးခေါင်းခွံကိုဖယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသင်သိပါတယ်။ သင်၏ဖောက်သည်အချို့ကိုသက်သာစေရန်ဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်နာကျင်မှုရှိပါသည် Numbify လို့ခေါ်တဲ့အစွမ်းထက်လက်ကားထုတ်ကုန် ၎င်းသည်တက်တူးထိုးထားသောလေဆာရောင်ခြည်ကိုသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်မှဖယ်ထုတ်ခြင်းတွင်ပါဝင်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုများစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ လူများသည်လေဆာဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်သင်၏ဖောက်သည်များ၏နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းစေမည့်စိတ်ချရသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုသင်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ လက်ကားရောင်းသူအနေဖြင့်သင်ယခင်ကအလွန်ကြောက်လန့်နေသည့်ဖောက်သည်များကိုခေါ်ဆောင်လာလိမ့်မည်.
Tattoos နှင့် Piercings အတွက်လက်ကား Lidocaine Numbing
နိုဝင်ဘာလ 2, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Lidocaine ဆေးသည်တက်တူးထိုးခြင်း၊ ဒါဟာအများဆုံးလိမ်းမေ့ဆေးထက်ပိုကြာလှည့်ပတ်ခဲ့နှင့်တစ် ဦး ရှိပါတယ် ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ယာယီနာကျင်မှုသက်သာစေရန်ထောက်ပံ့ပေးသောအလွန်ကောင်းမွန်သောမှတ်တမ်း။ သို့သော် Lidocaine ၏ထိရောက်မှုသည်ထုတ်ကုန်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားဆေးဆိုင်များအတွက်လက်ကားရောင်းဝယ်ရေး - ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးသည်
အောက်တိုဘာလ 29, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဒေသခံဆေးဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အမျိုးသားဆက်သွယ်ရေးကွင်းဆက်ဖြစ်စေဆေးဆိုင်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာသင်သည်ရပ်ရွာလူထုအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်းသင်သိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ လူတို့သည်မိမိတို့ဆေးဆိုင်သို့ကြိုတင်ဆေးရောင်းရန်သွားသည့်အခါသူတို့သည်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာလိုအပ်သည့်အရာကို ၀ ယ်ကြသည်၊ ထို့နောက်သူတို့ပိုမိုသက်သာလာသည်။ လူတစ် ဦး နှင့်သူတို့၏ဆေးဆိုင်များအကြားကြီးထွားလာသည့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုနှင့်၎င်းသည်လူ့အခြေအနေ၏မကြာခဏသတိမထားမိသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အင်အားအကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးလက်ကားရောင်းဝယ်မှုနှုန်းမြင့် Cream သုံး၍ Spa Waxing အခွန်တိုးမြှင့်ပါ
အောက်တိုဘာလ 18, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်တစ်နေ့ spa / ဖယောင်းစတူဒီယိုတွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား။ “ နင့်ဆံပင်တွေကိုဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တာကိုနာကျင်သလိုမျိုး Dang” ဟုရိုးရှင်းစွာပြောလိုက်သည့်အခါသင်မြင်ဖူးပါသလား။ လူအများစုတို့သည်ဝေးလွင့်သွားသောဖြစ်စဉ်နှင့်အတူအချို့သောနာကျင်မှုများကိုခံစားကြရသည် သူတို့ရဲ့မလိုချင်တဲ့ဆံပင် (သင်သိသည်အတိုင်း, သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အထူးသဖြင့်နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်), ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ဖယောင်းနာယကနာကျင်မှုကိုရိုက်နှက်သူတို့ကိုပိုမိုစောင့်ရှောက်ကူညီနိုင်သည့်အလွန်ကြီးစွာသောထုတ်ကုန်ရှိပါသည် ပြန်လာဖောက်သည်ဖြစ်လာမှပျော်ရွှင်ထက်။ Numbify ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သမာဓိရှိရန်ကတိကဝတ်ပြုခြင်းနှင့်၎င်း၏အားကောင်းသောဂဏန်းသက်ရောက်မှုများကြောင့်လူသိများသည် Numbify သည်စိုးရိမ်ပူပန်သောဖောက်သည်များအားသူတို့၏လာမည့်လာမည့်ရက်ချိန်းကိုစဉ်းစားရန်ပင်ကူညီနိုင်သည် အဆိုပါဖယောင်းအလှတရားလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နာကျင်မှုနှင့်အတူ။
အကောင်းဆုံး / အပြင်းထန်ဆုံး Numbing နှင့် Pain Relief လိမ်းဆေး Cream ဂျယ်လ်နှင့်ရေမှုန်ရေမွှား
အောက်တိုဘာလ 10, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
စတိဗ် Carrell ၏ပရိသတ်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့အဖို့သူသည်ရင်ဘတ်အားယိုယွင်းနေသည့်အသက် (၄၀) အရွယ်ရှိအပျိုစင်တွင်မြင်တွေ့ရသောအဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအမှတ်ရနေပါသည်။ ငါကြည့်ရုံသတိရရုံ grimace! ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရှိကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေရှိ follicles များမှဆံပင်ကျဲနေခြင်းကိုခံစားခြင်းအားဖြင့်အဖြူရောင်လက်ဖြင့်ဆံပင်ပါးရန်လိုအပ်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုရှိသည်။ Numbify ထောက်ပံ့ လိမ်းဆေးလိမ်းဆေးများ၊ ၎င်းသည်ဖယောင်းသုတ်ဆေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သောနာကျင်မှုကိုအကြီးအကျယ်ကူညီနိုင်သည်။
Tattoo Supplies Lidocaine အခြေပြု Numbing Creams Gels & Spray အလွန်အားကောင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာ
အောက်တိုဘာလ 4, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
သင်သွားသောနေရာတိုင်း, Numbify တစ် ဦး အိမ်ထောင်စုအမည်ပို။ ပို။ ဖြစ်လာနေသည်။ Numbify သည်၎င်း၏နယ်ပယ်တွင်ခွန်အား၊ ထိရောက်မှုနှင့်သမာဓိရှိခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အရာများစွာရှိသည် Numbify ဆိတ်ကွယ်ရာ၎င်း၏ပြိုင်ဘက်မှ။ အကောင်းဆုံးသောအရာများကို၎င်း၏လိုဂိုတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ပိုမိုခိုင်မာသည့် lidocaine numbing၊ စျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှင့်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ.
သင်သည် Numbing ၏ကြော်ငြာကိုသင်မယုံလျှင်၊ သူတို့၏ Numbing ထုတ်ကုန်များကိုသင်မည်သို့ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မည်နည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 28, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Hippocratic ကျိန်ဆိုခြင်းကိုသမားတော်များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရပ်တွင်ပါ ၀ င်သူများ၏လမ်းပြအတွေးအခေါ်ဟုလူသိများသည်။ အစောပိုင်းဂရိအတွေးအခေါ်တွင်အမြစ်တွယ်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏ဘဝကိုအနာရောဂါနှင့်ဆေးဝါးများကိုမြှုပ်နှံသူများသည်ပိုမိုမြင့်မားသောကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများနှင့်အညီနေထိုင်ရမည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြပြီးထိုကျိန်ဆိုချက်သည်ထိုအတိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နှစ်များတစ်လျှောက်ပြောင်းလဲသွားသည် (Apollo အားကျွန်ုပ်တို့ကျိန်ဆိုတော့မည်မဟုတ်) က၎င်းရပ်တည်နေသည့်အရာ၏အနှစ်သာရမှာမူတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်များကိုပိုမိုမြင့်မားသောစံသတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
Numbing Cream ကိုလက်ကားဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ထူးခြားသောနာကျင်မှုသက်သာခြင်း
စက်တင်ဘာလ 22, 2019 သြဂုတ်လ 1, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
ဆေးခန်း, ဆေးဆိုင်များ, အွန်လိုင်းထောက်ပံ့ရေးစတိုးဆိုင်များ, Tattoo အခန်းများနှင့် Day spas။ ဒီနေရာတွေအားလုံးမှာဘာတူညီချက်ရှိသလဲ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရလူတို့သည်အင်အားအကြီးဆုံးကိုအမြဲတောင်းဆိုနေကြသည် otc lidocaine နာကျင်မှုကယ်ဆယ်ရေး။ ကနေအရာအားလုံးအဘို့ တက်တူးထိုးမထည့်ခြင်း, လွမ်းတယ်, ဖေါက်ဝင်, လိပ်ခေါင်း နှင့်အခြား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်နာတာရှည်နာကျင်မှုအခြေအနေများ။ ပြည်သူ့အစဉ်အမြဲအပါအဝင်ယနေ့အပါအဝင်ရှိသည် ပိုမိုအားကောင်းသည့်နံပါတ်ထုတ်ကုန်များဖြစ်သောကြောင့်ယနေ့သူတို့သည် Numbify ကိုလိုချင်ကြသည်.
Numbify သည်အပြင်းထန်ဆုံး Numbing Cream လား။ 5rd Party Side-by-Side Testing မှတဆင့် Duel ကို 3% Creams အားလုံးကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ 14, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Talk နှင့်တုန့်ပြန်မှုအတုများသည် Numbify တွင်စျေးပေါပြီး၎င်းကိုသက်သေပြရန်ထွက်လာသည်။
Numbify သည်ထိုကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ရေပန်းစားနေသောနံပါတ်တုတ်များဖြစ်သည် Numbify.com Amazon.com, Walmart.com, & Ebay.com သည်အခြား Lidocaine နံပါတ်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်မကြုံစဖူးစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်! CEO ဖြစ်သူ Drew Steig ကိုကိုးကားပြီး“ သူဟာထဖို့ဒါမှမဟုတ်ပိတ်ထားဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ”
Numbify သည်လူကြိုက်များသောဘွဲ့အမည်ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကဖော်ပြခဲ့သည် အပြင်းထန်ဆုံး Numbing Creams, Gels & Spray များ။ အခြားသူများကတရားမ ၀ င်စားသုံးသူလိမ်လည်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သူတို့၏အချိန်နှင့်ငွေများကိုသုံးစွဲနေကြသော်လည်း Numbify သည်သဘာ ၀ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုတတ်နိုင်သမျှများများအသုံးပြုနေစဉ်တွင်၎င်း၏ကုန်ပစ္စည်းစွမ်းအားနှင့်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။
လက်ကား Lidocaine Cream - တန်ဖိုးနည်းပြီးသာလွန်သောထိရောက်မှု
စက်တင်ဘာလ 12, 2019 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
Numbify သည်သူတို့၏လျင်မြန်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထိရောက်သောနံပါတ်များဆေးကြောခြင်း၊ လိမ်းဆေးများ၊ Numbify ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများလက်ကား 5% နှင့် 4% lidocaine လိမ်းဆေး ဆေးရုံများ, ဆေးသမား '' ရုံးများ, လူနာစောင့်ရှောက်မှု, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့်တစ်ရက် ဗေဒင်ဆရာ, တက်တူးထိုးထုတ်ကုန်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်ဖြန့်ဖြူး။ လက်သည်းထည်ကုန်ပစ္စည်းများလက်လီဆေးကြမ်းများတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဂျယ် နှင့် ရေမှုံပက်.
သင့်မိသားစုကိုပြင်ဆင်ရန်ပထမ ဦး ဆုံးကူညီထောက်ပံ့မှု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick စက်တင်ဘာလ 7, 2019 ဇူလိုင်လ 14, 2020 All- စတားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း	မှတ်ချက် Leave
နွေရာသီနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှအချိန်သည်ရှေ့သို့ချီတက်နေပြီး၊ မိဘများဖြစ်သောငါတို့အတွက်ထိုနှစ်အတွက်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအချိန်ကစတင်သည်။ စက်တင်ဘာလမှာကျွန်တော့်သမီးကအမေနဲ့အဖေအတွက်ခရစ္စမတ်ကိုခေါ်တာပါ၊
ဤအရာကိုဘေးဖယ်ထားခြင်းသည်မိဘများရောကလေးများပါစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ ကလေးတွေဟာသူတို့သူငယ်ချင်းတွေကိုနွေရာသီနားမှာပျောက်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်မှာမိဘတွေဟာအနားယူတော့မယ်။ အားကစားသည်ယခုနှစ်တွင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သကဲ့သို့၊ ကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများအပြီးတွင်လည်းအန္တရာယ်များသော၊ အချိန်ကုန်သော (သို့) နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ထားသောအခြားအရာများစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံး၌ခြစ်ခြင်းနှင့်အနာတို့သည်ဖြစ်ပျက်တော့မည်ကိုမိဘတိုင်းသိထားကြသည်။ သင်၏ရော့ခ်ကြယ်ပွင့်လေးသည်ဗန်သို့ပြန်ကျသောအခါသင်၏ပထမဆုံးအကူအညီကိရိယာကိုသင်အသင့်ရှိရန်လိုအပ်သည်။
Hemorrhoid ခွဲစိတ်ကုသခြင်းအမျိုးအစားများ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများ
သြဂုတ်လ 31, 2019 စက်တင်ဘာလ 11, 2019 ဟယ်လင်ကနေဒီ	မှတ်ချက် Leave
ယင်းတို့ကိုလိပ်ခေါင်းဟုလူသိများသည်။ သင်၏ rectum သို့မဟုတ်စအိုအတွင်းရှိသွေးပြန်ကြောများအစုအဝေးရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်သောဤအမြှေးပါးသွေးပြန်ကြောများသည်အပြင်ဘက်အမြှေးပါးကိုစတုဂံနှင့်စအိုတစ်သျှူးများသို့ပြန့်နှံ့စေပြီးအလွန်နာကျင်ကိုက်ခဲ။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် hemorrhoid နာကျင်မှုကိုဖယ်ရှားရန်နည်းလမ်းများနှင့်အိမ်တွင်းဆေးများ၊ ဆေးကောင်တာများနှင့်လိမ်းဆေးများကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ လိပ်ခေါင်း ယားယံမှုကိုလျှော့ချရန်။ အကယ်၍ ဤအခြေအနေသည်ဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်ပါကတစ်ချိန်ချိန်တွင်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် hemorrhoid ကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူရပါလိမ့်မည်။
12ပို့စ်အဟောင်းများ
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုရှေ့သို့ချီတက်ရန် Cloud Scaling မဟာဗျူဟာ ၅